Homeसमाचारश्रीमानले हानेर टा’उको फु’टाइदिए, छोरी र मलाई लिन त्यो दिन देखि क’हिल्यै आएनन – गायिका मधु छेत्री(भिडियो)
May 17, 2021 admin समाचार 1081
मधु क्षेत्री र टिका सानु नेपाली लोकदो’होरीका लागि परिचित नाम हो । उनीहरुले गाए’का थुप्रै गीतहरु हिट छन । टिका पुन खासगरी लाइभ दोहोरीका लागि बढि चर्चित छन्, मधु भने सोचे झै जिन्दगी रैनछ भन्ने गीत’वाट धेरैले चिन्न सक्छन् । धमलाको हमला कार्यक्र’ममा पुगेका उनीहरुले निकै रमाइलो गरेका छन् । टिका सानुले धमलाको कार्यक्रममा दोस्रो पटक आइयो भन्दै गीत गाएर कार्यक्रमको सु’रुवात गरेकी थिइन् ।
टिका पुनले नयाँ भा’कामा गाएका कारण त्यसको जवाफ म दिन सक्दिन भन्दै मधु शाहीले जवाफ दिइनन् । नेपाली’हरुको मुख्य पहिचान लोक संस्कृती भए’का कारण नै लोकदोहोरी सफल भएको उनीहरुको भनाई छ । मधुले आफ्नो मन निकै कमजोर छ भन्दै सानो कुराले रुने गरेको बताइन् । उनले सानै उमेरमा मागी वि’वाह गरेकी थिइन् । तर वैवाहिक जिवन सफल न’भएको उनको भनाई छ ।
लक्ष्मी पु’जाको दिन आफुलाई दिएको या त ना दिएको सम्झेर अहिले पनि उनी भावुक भइन् । अहिले त्यो खो’ट देखाउँदै या त ना सहन नसकेर सम्बन्ध छुटा’एको उनले बताइन् । उनले अहिले आफु खुसी भएको बताइन् । उनले तीन वर्ष अघि सम्म पनि फेरी सम्बन्ध सुधार्न खोजेको भएपनि त्यो सम्भव नभ’एको बताइन् । उनी अहिले सन्तानका लागि संघ’र्ष गरेको बताएकी छन् ।
उनीहरुले अहिलेको महा’मारीको अवस्थालाई इंकित गर्दै पनि दोहोरी गाएका थिए । जनताको वास्त’विक दुख नेताले बुझ्न नसकेको भन्दै गुनासो गरे । बुढा नेता बगाएर लैदिए, म नेता भैदिए म देश बनाउँथेँ भन्दै उनीह’रुले ब्यंग्य पनि गरे । इन्द्रेणी नेपालबाट
धनकुटामा ३ दिन देखि ठूला दुई सर्प नाचेको नाच्यै, स्थानियहरु हेरेर छ’क्क (भिडियो हे’र्नुहोस)
December 1, 2020 admin समाचार 3937
‘राई इज किङ’को रुपमा परि’चित गायक राजेश पायल राई र गायिका कल्पना राईको आवा’जमा रहेको लोकगीत ‘सम्झना भो गाउँघरको’ सार्वजनिक भएको छ। गीतको भिडियोसहित सार्व’जनिक भएको हो। मातृभूमि वर्णि’त गीतको शब्द जानुका राईले लेखेकी हुन्।
बरिष्ठ कलाकार तथा निर्देशक, चन्द्रशेखरको ९८ वर्षको उमेरमा नि’धन
June 16, 2021 admin समाचार 815
रामनन्द सागरको ‘रामायण’मा ‘आर्य सुमन’को भूमिका नि’भाएका बरिष्ठ कलाकार चन्द्रशेखर बैद्यको ९८ वर्षको उमेरमा नि’धन भएको छ । बरिष्ठ कलकार चन्द्रशेखरको बुधबार विहान सात बजे आफ्नै घरमा नि’धन भएको हो । निर्दे’शक समेत रहेका चन्द्रशेखरलाई
April 22, 2021 admin समाचार 1243
चलचित्र रावण मार्फत नेपाली रजत’पटमा प्रवेश गरेका कलाकार किशोर खतिवडा माथि एक महिलाले ग म्भि’ र आ रो प ल गाए की थिइन तर यो सब झु’ट भएको बाहिरिएको छ ।लक्ष्मी आफै एक मिडियामा आएर
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (193658)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (186260)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (185785)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (185714)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (183890)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (183668)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (182230)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (181321)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (174924)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (151523)